Me RAZAFIMANANTSOA HANITRA : RAHA MARO NY VEHIVAVY NANDRAY ANDRAIKITRA DIA TSY NITARAZOKA LAVA BE NY KRIZY – MyDago.com aime Madagascar
Me RAZAFIMANANTSOA HANITRA : RAHA MARO NY VEHIVAVY NANDRAY ANDRAIKITRA DIA TSY NITARAZOKA LAVA BE NY KRIZY
Tsy diso anjara tamin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an’ny vehivavy androany ny vehivavy avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana. Araka ny efa nambaran’izy ireo ombieny ombieny dia ny fanomezan-drà no hetsika entina hanamarihana izany. Ny maraina teo dia nifamotoana tetsy amin’ny hopitaly HJRA ireo vehivavy Ankolafy Ravalomanana ireo. Ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra, ny Cst Naika Eliane, ary ny Ct Rasoanoromalala Horace no nitarika ireo vehivavy tamin’izany. Araka ny fanazavana nataon’ny mpisolovava mpanao politika Razafimanantsoa Hanitra dia nanome rà ny Ankolafy Ravalomanana, ny antony dia fantatra loatra fa izany rà izany dia sarobidy amin’ny olombelona. Izay mamone ra dia manome aina. Ny reny izay dia tianay avoitra hoy izy dia manome aina, ary izany reny izany dia iateheran’ny firenena. Fantatra ihany koa ny filàn’ny hopitaly izany rà izany fa tsy ampy. Noho izany hoy Me Hanitra dia fotoana iray hanomezana ny vehivavy Ankolafy Ravalomanana rà izao.
Momba ny hoe vehivavy manao politika dia nambarany fa ny vehivavy malagasy amin’izao fotoana izao dia efa sahy miseho sehatra politika. Entanina izy ireo mba ho sahy bebe kokoa ary handray andraikitra bebe kokoa satria ny vahoaka malagasy dia maro vehivavy. Izay fandraisana andraikitra izay hoy izy no handrasana amin’ny vehivavy indrindra amin’izao krizy izao. Raha maro ny vehivavy nandray andraikitra tao anatin’ny famahana ny krizy dia tsy nitarazako lava be io satria nisy olona sahy nitsangana dia nanaraka daholo taty aoriana. Izay izany no azo atao hoe positive amin’ny kirizy. Ny fahasahiana ny vehivavy hoy Me Hanitra , mitsangana mampiseho ny maha vehivavy azy ary mampiseho ihany koa ny fomba fijeriny amin’ny famahana ny krizy dia zavadehibe. Na izany na tsy izany aza dia vehivavy eto Madagasikara dia mila tairina mila tarihina indrindra ny any amin’ny faritra sy ambanivohitra, satria vao miala kely eto Antananarivo dia mahita fa ianjadian’ny zavatra marobe ny vehivavy. Na eo aza ny fiompiana, fambolena dia tsy mahazo sehatra loatra amin’ny fitantanana sy ny fampandrosona araka ny tokony ho izy ny vehivavy. Nefa hoy Me Hanitra raha mandray andraikitra daholo ny vehivavy dia mandroso ny firenena. Ho ahy manokana dia tombony ho an’ny vehivavy manao politika dia izay maha vehivavy azy izay no avoitrany na izay fomba fanaony izay. Amin’ny ankapobeny dia tsy tokony ho be resaka raha hanao zavatra, tsy mampanantena volana satria tsy misy dikany raha sanatria ny vava raha ny zavatra ataon’ny lehilahy ihany no ataony. Mikasika ny fodiany Ramatoa Lalao Ravaloamnana dia nambarany fa tsy nisy ny fivoriana niarahana tamin’ny Praiminsitra. Amin’izao fotoana izao dia efa tsy miteny ary tsy mintsangana Bebe Razay, koa ny fanirianay amin’ny andro kely sisa iainany dia ny hihaonany amin’ny zanany. Momba ny resaka alefa ankehitriny fa tsy navela hody ny vadin’ny Tantely tamin’ny fotoan’androny dia nambarany fa nody tsy nisy fepetra ary afaka niantsena ny vadin’izy ireo tamin’izany, tsy nisy sakana. Ny fanakanana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana ve hitondra fitoniana.
Araka ny fantatra dia hihaona amin’ny filohan’ny mpanongam-panjakana eny Ambohitsirohitra ny solontenan’ny Ankolafy Ravalomanana izao atoandro izao, momba ny fodian’ny Lalao Ravalomanana.Andrasana izay ho vokany.
3 réflexions sur « Me RAZAFIMANANTSOA HANITRA : RAHA MARO NY VEHIVAVY NANDRAY ANDRAIKITRA DIA TSY NITARAZOKA LAVA BE NY KRIZY »
Marina ny anao!I Lila Ratsifandriamanana izao anisan’ny nantenaina.Manaova fety sambatra daholo ry Andriambavilanitra.
8 mars 2013 à 23 h 42 min
Aza mahasossssa an!!jereo iza no tena maro an’isa ny
mpitolona eo @ Magro???dia iza no manatevin-daharana lava izao
sy manao hetsika etsy sy eroa??jereo i Ramatoa Naika ??mitsongo-dia atsy sy aroa , mihaino ny vahoaka
sy manohitra ny tsy rarainy rehetra, sahy miatrika ady tsara mihintsy @ lafiny rehetra, na ady sarotra izany
na ny mora, fa ireto lahim-bomanga tsy han’inona tsy han’inona, tsy hiira sady tsy hanao tsianjery hihiiii
9 mars 2013 à 14 h 16 min
Ianareo efa nomena andraikitra mazava no tokony tena hiasa mafy voalohany ry maitre Hanitra a,dia avy eo mbola ianareo ireo ihany no tokony hitarika ny olona hietsika,fa tsy vitan’ny resaka izy ty!raha am zao fitrangan javatra izao dia mampametram panontaniana hoe tena mahay ny asanareo sy izay tokony andraikitrareo ve ianareo?raha eny,dia fanontaniana manaraka:tena te hampody ny filoha Ravalomanana mianakavy ve ianareo?(tsy ny vehivavy ihany no resahiko fa ianareo rehetra mitonona ho mouvance Ravalomanana)
Précédent Article précédent : TOLO-TANANA HO AN’NY ANY ATSIMO : NITONDRA NY ANJARA BIRIKINY NY ANKOLAFY RAVALOMANANA
Suivant Article suivant : NAIKE ELIANE : RAHA TSY TAFAVERINA ETO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC SY NY FIANAKAVIANY DIA TSY HIHAVANA IZAHAY